လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လက LEGO Harry Potter ရဲ့ Hedwig အသစ်ကိုငါတို့တွေ့ခဲ့တယ်
25 / 08 / 2021 26 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 226 Views စာ 1 မှတ်ချက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, ဟယ်ရီပေါ်တာ, ဟယ်ရီပေါ်တာ ၂၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်, Lego, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Minifigures, မားကို့စ Bessa, သေးသေးလေး, ပါမောက္ခ Dumbledore, ပါမောက္ခ McGonagall, ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, Rubeus Hagrid, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား
Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှုHedwig ကိုလွန်ခဲ့သောခြောက်လကထုတ်ဝေသော Rebuild the World ပိုစတာတွင်မူလကထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
ဒါက Design Master Marcos Bessa ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘဲ Brick Fanatics ယခုနှစ် direct-to-consumer set ၌ကြီးမားသောဇီးကွက်သည် Wes Talbott မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပုံစံပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ Lego အဖွဲ့၏လက်ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှု
“ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာတစ် ဦး ထံချဉ်းကပ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Rebuild the World campaign အတွက်အသက်အရွယ်ဇီးကွက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သူတို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်” ဟု Marcos ကရှင်းပြသည်။ “ Wes Talbott သည်စိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးအသက်အရွယ်အုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇီးကွက်ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ”
အထက်ပါပိုစ့်ကို (သို့) ကျော်ကြည့်နိုင်သည် Behance၎င်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီကတည်းကလူသိရှင်ကြားမြင်နိုင်သောနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ထိုပြခန်းတွင်ပြထားသောပိုစတာများသည်အနာဂတ်တွင်အလားတူသဲလွန်စများထားရှိရန်ပုံမပေါ်ပါ။ Lego အစုံ (သင်ထည့်မတွက်လျှင် Lego အုပ်စုသည်ဧရာမအားထုတ်ရန်နီးနေပြီ Minecraft ပျား၊ အဲဒါ)
Wes's Hedwig နှင့်နောက်ဆုံးဇီးကွက်ကြားဆင်တူသည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု သိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ၎င်းသည်ပုံစံတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်လှုံ့ဆော်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“ လအနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့နောက်ထပ် D2C အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအကြောင်းဆွေးနွေးနေတယ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာပြီးတော့ငါတို့ကတမူထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုယူလာတာသေချာချင်တယ်” ဟု Marcos ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ “ Wes ကဒီပထမဇီးကွက်နဲ့အရမ်းတောက်ပတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးကတည်းကငါကကျန်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ငါတို့အဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး concept idea တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။artWarner Bros မှာလုပ်တယ်။ ”
ကျန်အပိုင်းအစ ၃,၀၁၀ သည်ထိုနေရာမှကျဆင်းသွားပြီး Wizarding World ပါ ၀ င်သောအရာများအပါအ ၀ င် Hedwig နှစ်ခုလုံးကြားတွင်ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့် Warner Bros.
“ ငါတို့ရဲ့ IP partner သည်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တုတ်ကိုထည့်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည်၊ ထို့ကြောင့်မူရင်းပုံကြမ်းတွင်စာအုပ်နှစ်အုပ်၊ ဆေးရည်ပုလင်းအချို့၊ ကြိမ်လုံးနှင့် Harry ၏မျက်မှန်များ၊ ရွှေ minifigures သုံးခုဖြစ်သော Dumbledore, McGonagall နှင့် Hagrid၊ ” Marcos ကထပ်ပြောသည်။
“ ဇီးကွက်သည်စာအုပ်များပေါ်တွင်အတော်လေးစာသားမဲ့စွာမျောပါနေပြီးအလှည့်အပြောင်းများတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆက်အစပ်မရှိပေ။ စိတ်ကူးကိုထုတ်လွှင့်ရန်ခက်ခဲသောဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံကြမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်လူတိုင်းက၎င်းကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ ”
ရလဒ်များသည်သင်ဖတ်နိုင်သည့်အတိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတတ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်. ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင်စတာလင်ပေါင် ၂၂၉.၉၉ / ဒေါ်လာ ၂၄၉.၉၉ / € ၂၄၉.၉၉ ဖြင့်စတင်မည်။
← LEGO Harry Potter နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ရွှေရုပ်သေးသေးလေးကိုအတူတကွပြသသည်
LEGO 71031 ဆိုတာဘယ်သူလဲ Marvel စတူဒီယို 'Sylvie? →
တစ်ခုမှာ "လွန်ခဲ့သောခြောက်လက LEGO Harry Potter ၏ Hedwig အသစ်ကိုငါတို့မြင်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုခဲ့သည်"